Viidiyoo, 26 Fulbaana 2017 page 1
Kibxata 26 Fulbaana 2017
Pireezdaant Traamp Hariiroo Afrikaa fi Yunaaytid Isteets laalchisee hoggantoota biyyoota Afrikaa wajjin kaleessa marii godhan
“Afrikaa keessa carraa daldalaa guddaatu jira. Hiriyoota duroomuudhaa gara biyyoota keessanii deeman baayyen qaba, maallaqa baayyee achitti baasaa jiran ...baga gammaddan siniin jechuun barbaada.”
Mootummoota Gamtoomanitti hoogantoonni dhabbatoota qarqaarsa nyaataa kennan sadi’ii Itoophiyaa daawwatan
Kaayyon daawwannaa isaanii “hanqina nyaataa lammiiwwan biyyattii miliyoona sadeetii olii saxilamaniifii jiran xiyyeeffannaa fi hojii guddaa waan babdaadu ta’u agarsiisufi,” jedha gabaasni AFP. Gabaasa guutun kinooti.
Roobin bonboleettii makatee Yunaayitid Isteets godina Teksaasasitti roobaa jiru lammiiwwan Ameerikaa miliyoonaan lakkawwaman loolaadha saaxi
Qophiiwwaan addaa sagantaa keenya irratti dhufaa jiran keessaa
Doo’ii Waaraabessa Kunuunsuu Harargeetti Tuuristoota Hawwachaa Jiru
Doo’ii Waaraabessa Kunuunsuu Tuuristoota Hawwate Harargeetti maaatin oggoota 40 olii waraabessoota nyaata dhiheesuudhan tuuristoota harkisaa ture guddinni magaala Harar bosona haphisaa dhufuun nu yaaddesse jedhan.
Marii Dargaggeessa Qaroo, Kennaa Addaa Qabu Wajjin
Marii Dargaggeessa Qaroo Kennaa Addaa Qabu, Hundee Eebbaa Wajjin
Adoolessa 06, 2017
Doonalld Traamp: Safuun Biyyoota Addunyaa Gama Lixaa Haleellaa Jala Jira
Dargaggoonni Afrikaa Interneetii Fayyadamuudhan Waltajjii Marii Uummachuudhan Milkaa'aatii Jiran
Sagantaan kun hojiiwwan dargaggoonni Afrikaa itti jiran keessaa amma tokkoon wal-sinbarsiisa, lalaa.
Haalli siyaasa biyyaatti lammiiwwan Ameerikaa addaan fageessuus
Ameerikaanonni waggaa waggaatti gaafa Adoolessa afurii guyyaa walabummaa yokaan “Independence Day” jechuudhaan ayyaaneffatu.
Raabiyaa Kubeel amantaa Islaamaa oggaa kudhan dura fudhatte. Dhiheenya kana masjiida haaraa Yunaaytid Isteets godina Kaalifoorniyaatti banteetti. Masjiida kana maaltu adda godha? Dhaggeeffadhaa. #Religion #Oromo #Ethiopia
Waxabajjii 21, 2017
Guyyaan baqattoota addunyaa yeroo kabajamu torban kana komiishineerri ol aanaan dhimma baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa Filiippoo Graa
Chaayinaan Biyyoota Afrikaa Harroota Bayyee Qabanitti Fulleffachuun Harree Dhabamsiisuuf Deema
Chaayinaan Biyyoota Afrikaa Harroota Bayyee Qabanitti Fulleffachuun Biyyoota Harree Dhabsiisuuf Deema
"Nyaanii jiru ji'a tokko keessatti dhumuuf deema. San booda waan ta'u in beeknu" jedha, Itoophiyaatti daayrektariin dhabbata miti-mootummaa
Marii Gabaabaa - Gadaa (Tasfaayee) Gabra'aab Wajjin
Caamsaa 31, 2017
Saamuu’eel Margaa Barataa Oromoo Qarooma Teknooloojiin Beekame
Ongeen Somaaliyaa muudate namoota miliyoonaa 6 ta'an hanqina nyaataatii saaxileera . Ijoolleen kuma afurtamaa ol barumsa dhiisaniiru
Ongeen Somaaliyaa muudate namoota miliyoonaa 6 ta'an hanqina nyaataatii saaxileera . Ijoolleen kuma afurtamaa ol barumsa dhiisaniiru, warri barachaa jiran bayyeenis garaa duwwaa gara mana barumsaa waan dhaqaniif baruuf barsiisuun rakkisaa ta’e jedhan barsiistonni.
Caamsaa 22, 2017
Qoricha Lubbuu Deechuu Kumaan Lakkawamanii Du'a Irraa Oolchu
Caamsaa 11, 2017
Beelaa fi Ongee Ardii Africa Muudate
Caamsaa 08, 2017
Intalli oggaa 16 hijaaba godhattee booksii tabattu, Amaiyaa Zaafar, cimanii mirga ofiiti falminaan, milkaa'uun in danda'ama jetti
Intalli oggaa 16 hijaaba godhattee booksii tabattu, Amaiyaa Zaafar, cimanii mirga ofiiti falminaan, milkaa'uun in danda'ama jetti. Injifannoon ishii fakkenya gaarii ta'uus ibsiti.
Somaaliyaattii ijoolleen 185,000 hanqinaa nyaataatiin dararamaa jira Namoonni gara miliyoona 3 qarqqarsa nyaataa atattamaan barbaadan
Ebla 17, 2017
Naannoo Affaar hora Assaaleeti jiraattonni hojii soogidda baasuu irraatti bobba'an mootummaan naannoo isaanii investarootaaf banuun "nu yaa
Naannoo Affaar hora Assaaleeti jiraattonni hojii soogidda baasuu irraatti bobba'an mootummaan naannoo isaanii investarootaaf banuun "nu yaaddeessa" jedhan.
Marii Ilma Karrayyuu, Robaa Bulgaa Jiloo Wajjin